कस्तो चल्यो ‘अमेरिका बोइज’ ? हलमा पुगेका कलाकार ।।
हाम्रो शुक्लाफाँटा, राम्रो शुक्लाफाँटाका अभियान्ताद्वारा विद्यालयलाई सहयोग ।।
कञ्चनपुरको पुनर्वासमा वन तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न युवा समिति गठन ।।
कञ्चनपुरको बेलौरीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई सामाजिक जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण ।।
कञ्चनपुरको बेलौरीमा नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको शाखा उद्घाटन ।।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई साइकल वितरण ।।
आहा ! कति रमणीय र सुन्दर छ, कञ्चनपुरको बेलौरीमा रहेको पर्यटकीय स्थल बन्दाताल ।। (फोटो फिचर)
शुक्रबारदेखि रिलिज भएको चलचित्र ‘अमेरिका बोइज’ले दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया पाएको यसको निर्माणपक्षले बताएको छ । शुक्रबार र शनिबार चलचित्रले राम्रो व्यापार गरेको दाबी समेत गरिएको छ । हिरा र चिठ्ठाको वरिपरी नै यो चलचित्र घुमेको छ । पूर्ण रुपमा कमेडी कथामा निर्माण भएको चलचित्रलाई प्रवेश पौडेलले निर्देशन गरेका हुन ।
चलचित्रमा अर्पण थापा, अभय बराल, आशिष प्रसाइको वरिपरी घुमेको यो चलचित्रले शनिबार सिंगल र मल्टिप्लेक्स हलमा राम्रो कमाई गरेको छ । चलचित्रको हल रिपोर्ट वुझ्नका लागि यसका कलाकार शनिबार केही हलमा पुगेका थिए । दर्शकले दिएको प्रतिक्रियाबाट आफूहरु खुशी भएको यसको निर्माणपक्षले बताएको छ ।
चलचित्रमा सुनिल थापा, हरिहर शर्मा, सन्दिप क्षेत्री, कामेश्वर चौरासिया, श्रृष्टी कार्कीको पनि मुख्य भूमिका छ । प्रकाश भुजेल र इन्द्रप्रसाद खरेलको संयुक्त लगानीमा यो चलचित्र बनेको हो । चलचित्रको वर्ड अफ माउथ सुखद रहेकाले दर्शक बढ्ने विश्वास लिइएको छ । शुक्रबारबाट नै रिलिज भएका अन्य २ नेपाली चलचित्रको व्यापार भन्दा ‘अमेरिका बोइज’को व्यापार धेरै माथि रहेको हल संचालकहरुले बताएका छन् । अनलाइनखबर
क– एन.बी. मिडिया नेटवर्कको परिचय : कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौँमा मिति २०७५ बैशाख ०४ गते दर्ता भएको एन.बी. मिडिया नेटवर्क कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित सञ्चारगृह (मिडिया हाउस) हो । आजको युग सूचना र सञ्चारको युग हो । सूचनाको हकलाई लोकतान्त्रिक
Address:Kanchanpur, Sudoor Pashchim, Nepal
© 2018 NB Media Network. All Rights Reserved.